Global Voices teny Malagasy » Japana : Fitomboana Tahanà Famonoantena Be · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Marsa 2018 2:52 GMT 1	 · Mpanoratra Hanako Tokita Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fahasalamàna, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Nandritra ny faran'ny herinandro (17-18 May 08), nitatitra resaka trangana famonoantena maro ny filazambaovao Japone izay misy ifandraisany amin'ny fampiasàna “gaz de sulfure d'hydrogène” , tamin'ny fanomezany famaritana amin'ny antsipirihany ny singa ao anatiny sy ny fomba nampiasana azy, hatramin'ny mombamomba ireo niharan-doza ihany koa. Tena nipariaka be sy namendrofendro be ilay fanadihadiana vao nivoaka tsy ela akory izay, hany ka notakian'ny Japan Suicide Prevention Association (Fikambanana Japone Miady Amin'ny Famonoantena) ny mba hitandreman'ireo vondrona filazambaovao misimisy kokoa amin'ny famoahana ireo fanadihadiana ataony  [jp]. Niteraka resabe tamin'ireo blaogera Japone ilay tranga, izay samy manana ny heviny mikasika io lohahevitra io.
Nanao fanamarihana toy izao momba ilay tranga ilay blaogera Misuto  :
Mananika ny 90 ny olona mamono tena isan'andro.
30000 anatin'ny taona iray.
Ny antony voalohany hamonoana tena dia ny hakiviana.
Mazava ho azy, io no ambony indrindra raha eo amin'ireo firenena mandroso.
Na izany aza, be loatra io, tena gaga aho.
Vao tsy ela akory izao, no nahitàna fanadihadiana maro mahakasika trangana famonoan-tena amin'ny alalan'ny “gaz de sulfure d'hydrogène”.
Manantena aho fa hihena io isan'ny famonoantena io…
Hoy ilay blaogera hakobe  nanoratra :
Mba hisorohana ny famonoantena (na koa hoe mba hisarihana ny olona hanana faniriana hiaina), ny ilaina dia fihetsempo ahatsapan'ny olona iray fa ilaina izy, ary ilay olona maniry ho ilain (ny fiarahamonina, mponina…sns) dia ilaina tokoa, araky ny hevitro
Reko fa mihamaro ny famonoantena amin'ny alalan'ny “gaz de sulfure d'hydrogène”.
Na efa an-dalana aza ny fanesorana ireo akora simika sy ny fampahafantarana ny fomba fanamboarana “gaz de sulfure d'hydrogène”, fanapahankevitra vonjimaika ihany izany “izay mety” hampihena ny isan'ny olona mamono tena “amin'ny alalan'ny sulfure d'hydrogène” “amin'izao fotoana izao”. Na inona fanapahankevitra mety ho raisina, raha mbola toy izao foana ny fiarahamonina misy, mety tsy hihena mihitsy ny tahan'ny famonoantena
Sary lehibe ho an'ny fanentanana manohitra ny famonoantena ao Tokyo : “Satrinay ianao hiaina”Misy amin'ireo blaogera no manakiana ny fomba fiasan'ireo filazam-baovao manoloana ilay tranga. Ito blaogera ito izao  dia manolotra sosokevitra ny amin'ny tokony hanafoanana tanteraka ny famoahana vaovao mikasika famonoantena :
Fa tsy tokony hanao zavatra ve isika manoloana ny fiverimberenana famonoantena ?
Nohon'ny antony vitsivitsy, misy fironana ahitàna ny olona tsy manao izay angatahana aminy, fa izay tsy asaina ataony ihany no ataony
Ka rehefa miteny ny filazambaovao hoe “aza manao izao”, dia misy olona manao an'iny foana, moa tsy izany va?
Marina fa zava-dehibe ho an'ny filazambaovao ny mitatitra ny marina,
saingy manao ahoana raha ajanona tanteraka any ny fampitàna ny resaka famonoantena amin'ny “gaz de sulfure d'hydrogène” ?
Mora sarihana amin'ny fanomezambaovao ny Japone, ary mora antitra ny zavatra iray rehefa tsy hita amin'ny televiziona intsony, izay no hevitro.
Marina, mora leo kely ny olona. Fotoana vitsy lasa izay, nisy ilay “Korea boom” sy “Hankachi Oji (Mpanjakan'ny mosoara)”, Tadidinao ? Mihevitra aho fa betsaka ny zavatra tsy ho tadidin'ny olona raha tsy mandeha amin'ny haino aman-jery intsony.
*Ankoatr'ireo tena mpankafy an'ireny zavatra ireny angaha.
Ilay raharaha hena baolina vita tamin'ny trondro nahapoizina olona
Hitanao, hadinonao tanteraka ilay izy?
Mbola tsy voavaha ilay olana, kanefa hijanona ho tsy voavaha eo. Toy ny karazana toetoetrin'ny Japone mihitsy ilay izy, izaho ao anatin'izany
Fahazaran-dratsy ilay izy raha ny hevitro.
Ary araka izany, raha tsy mamoaka vaovao mikasika ny “sulfure d'hydrogène” intsony ny filazambaovao, angamba mety ho tapaka ihany ilay tsingeringerin'ny famonoantena!!
Izany no marina! Any amin'ny haino aman-jery ny fanalahidy!!…ooof
Noresahan'ilay blaogera taishibrian  ny fomba nahalasa ny aterneto ho sehatra hironan'ny kiana ary notsipihany koa fa tsy manaraka ny toromarika avy amin'ny OMS momba ny famoahana trangana famonoantena ireo filazambaovao Japone :
Eo amin'ny ny tontolo malalaka sy marindranon'ny aterineto, misy, ohatra, ireo vohikala mikasika ny fanafotsiana amin'ny alalan'ny “sulfure d'hydrogène”, eo koa ireo vohikala manoritsoritra akora simika mahafaty haingana kokoa noho ny “sulfure d'hydrogène”. Na izany aza, tsy omena malalaka ny olon-tsotra akory ireo torohay ireo raha tsy hoe izy ireo mihitsy no manao fikarohana manokana, ary tokony ho jerena manokana koa ny mety hahalasa ireo haino aman-jery ho mpanoro ny fomba ahazoana izany torohay izany. Ny fepetra fanarahamaso izany anefa dia ho toy ny saka sy voalavo mifanenjika ary hiteraka tsingeringerina eo foana : [voalohany manana] harina fandrehitra ianao, avy eo “sulfure d'hydrogène”, ary avy eo ny …
Ho sori-dalana, soritan'ny OMS ny fomba tokony hampitàn'ny haino aman-jery vaovao mba hisorohana ny famonoantena :
(Jereo ato ny amin'ny teny anglisy )
*Aza mamoaka sary na fomba famonoantena
*Aza mamoaka famariparitana amin'ny antsipirihany ny fomba nampiasaina
*Aza manome antony manatsotsotra zavatra
*Aza manindrahindra na mamendrofendro amin'ny resaka famonoantena
*Aza mampiasa fitsaratsaram-poana ara-pinoana na ara-kolontsaina
*Aza manakina be fahatany.
Toa manoritsoritra ny toetran'ny haino aman-jery ankehitriny ireo teboka voalaza etsy ambony ireo.[…]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/09/115418/
 trangana famonoantena maro ny filazambaovao Japone izay misy ifandraisany amin'ny fampiasàna “gaz de sulfure d'hydrogène”: http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/02/japan.news
 notakian'ny Japan Suicide Prevention Association (Fikambanana Japone Miady Amin'ny Famonoantena) ny mba hitandreman'ireo vondrona filazambaovao misimisy kokoa amin'ny famoahana ireo fanadihadiana ataony: http://www.jiji.com/jc/zc?k=200804/2008041800785
 Ito blaogera ito izao: http://blog.livedoor.jp/lupin3_724/archives/51169212.html
 ato ny amin'ny teny anglisy: http://www.who.int/entity/mental_health/media/en/426.pdf